Soo dejisan HWMonitor 1.41 – Vessoft
WindowsNidaamkaTijaabada iyo TijaabooyinkaHWMonitor
Bogga rasmiga ah: HWMonitor
HWMonitor – software ah si ay ula socdaan xaaladda ka mid ah qaybaha kala duwan ee computer. software soo bandhigayaa qaab hadda ee processor, kaarka naqshadeynta, drive adag, motherboard iyo waxyaalo kale oo la dareemayaal dhisay-in. HWMonitor kormeera taageere xawaaraha wareeg, danab iyo heerkulka sifooyinka oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee computer. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto xaalad ka mid ah qaybaha computer by qiimaha marinkii. Sidoo kale HWMonitor ka akhrisan kartaa warbixin ku saabsan unugyada korontada transducer iyo shidma.
Muujiyeyaasha danab iyo heerkulka qaybaha kombiyuutarka
Bandhigay xawaaraha wareeg haadiyey
Bandhigay qiimaha marinkii of load ku saabsan qaybaha kombiyuutarka
Soo dejisan HWMonitor
CPU-Z – softiweerku waxa uu go’aamiyaa macluumaadka farsamo ee qaybaha ka kooban kombiyuutarka. Tasiilaadku wuxuu shaqada ku taageeraa noocyo badan oo ka kooban qaybaha.
Faallo ku saabsan HWMonitor
HWMonitor Xirfadaha la xiriira